Maxaa looga hadlay Kulanka Golaha Wasiiradda Soomaaliya maanta? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Maxaa looga hadlay Kulanka Golaha Wasiiradda Soomaaliya maanta?
Maxaa looga hadlay Kulanka Golaha Wasiiradda Soomaaliya maanta?
Golaha Wasiirrada xukuumadda fedraalka Soomaaliya ayaa kulan ay maanta ku yeesheen Muqdisho waxa ay ku meel mariyeen Hindise Sharciyeedka hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda, Hindise Sharciyeedka Socdaalka, Xeerka lahaanshiyaha xuquuqda Daabacaadda, siyaasadda waxbarashada dalka iyo Hindise Sharciyeedka Ciidanka Booliiska.
Kulanka golaha Wasiirrada ayaa sidoo kale lagu ansixiyay Sharciga abuurka iyo Noocyada Dhirta, Sharciga Badbaadinta dhir-beereedka, siyaasadda Qaran ee Bacrimiyayaasha, siyaasadda Qaran ee dulin-dilayaasha, sharciga hey’adaha adeegyada baaritaanka beeraha iyo sharciga xakameynta kiimikooyinka beeraha.
Shirka oo maanta uu guddoomiyay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa kale oo lagu ansixiyay Hindise Sharciyeedka Filimada iyo heshiis is-af-garad ah oo dhex maray wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo shirkadda SAT Service LLC ee dhistay hoteelka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabulle.
Previous articleMadaxweyne ku xigeenka Iran oo laga helay coronavirus
Next articleDHAGEYSO: Warka Habeen 27-2-2020